Miisaaniyadda iyo Maan-sarcaadinta Nabad iyo Nolol. – KHAATUMO NEWS
Miisaaniyadda iyo Maan-sarcaadinta Nabad iyo Nolol.
In ay korodho miisaaniyada dalku isla markaana shaqaalaha dawladda mushaharkoodu kordho gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyada oo wali mushaharkoodu aad u hooseeyo marka loo eego shaqaale badan oo xafiisyo iska fadhiya waa talaabo boogaadin mudan.
Hasa yeeshee waxaa jira arrimo badan oo ku geedaaman hufnaanta miisaaniyadaha iyo shafaafiyadda adeega xukuumadda NN oo ay had iyo jeer ku qariyaan dhaliishooda weedho qurxoon oo bulshada soo jiita gaar ahaan inta aan dhugmada u lahayn miisaaniyadaha iyo maamul wanaagooda, taasina ay keento in ay buunbuuniyaan waxaanay gunteeda la socon xaalkuna ka yahay in uu lanbarada loo sheegay uun dhagihiisu soo celceliyaan, had iyo jeerna markaa la sheego ay ugu danbayso.
Haddaba ugu horayn maxay tahay miisaaniyad sanadeedku?.
Miisaaniyad sanadeedku waa qorshe ay xukuumaddu soo bandhigto kaas oo ay ku qeexayso dhaqaalaha ay filayso in uu u soo xeroodo sanadka soo socda oo ay ku lifaaqan tahay kharashaadka ay xukuumaddu ay filayso in ay sanadkaa bixin doonto isagana.
Waxaana loo soo diyaariyaa qaab sharciga waafaqsan, oo ay ka muuqato hufnaan kuna dhisan xaqiiq bulshadana u cad, marka golaha wasiiraddu soo gudbiyo ayaa baarlamaanku ka doodaa waxna ka badelaa ama sideeda ku ansixiyaa, xukuumaddaha dhawra sharciga waxaa ku waajib ah marka miisaaniyadaas laysla ogyahay la ansixiyo in ay sideeda u fuliso iyada oo aan waxna ku darin waxna ka badelin, wixii iska badelana baarlamaanka dib loogu soo celiyo.
Waxaana aasaas u ah miisaaniyada laba qodob.
1. Dhaqaalaha soo xerooda.
2. Kharashaadka xukuumaddu bixiso.
1. Dhaqaalaha soo xeroodaa wuxuu ka yimaada a ilaha dhaqaalaha ee kala duwan sida cashuurta laga qaado dekadaha, Garoomada iyo Beriga, waxa kale oo dhaqaaluhu ka soo xeroodaa cashuurta laga qaado ganacsatada ee joogtada ah iyo tan bulshada laga qaado marka adeega loo qabto.
Waxa kale oo ka mid ah miisaaniyada kaalmooyinka ay bixiyaan hay’adaha caalamiga ah iyo taageerada ay bixiyaan dawladaha saaxiibada ah oo u ah dhaqaale lagu kabayo miisaaniyada.
2. Kharashaadka xukuumaddu bixiso ayaa iyagana waxaa ugu horeeya mushaharka shaqaalaha, adeega caafimaadka, adeega waxbarashada , dhismaha adeegyada lagu bixiyo, waddooyinka , deyn guud bixin , IWM.
Sanadku markuu dhammaado waxaa soo baxda sadex arrimood oo xukuumaddaha sharciga ilaaliyaa ku talaabsadaan baarlamaanka soo jeedana ku feejigan yahay xukuumadana kula xisaabtamaan.
1. Miisaaniyaddii la filayey oo tusaale ahaan ahayd 340 milyan wax ka badan ayaa soo xerooday oo faa’iido ayaa la joogaa, markan xukuumaddu faa’iido ayey joogtaa waana in ay soo bandhigaa xisaab xidhka miisaaniyada
2.Miisaaniyadii la filayey ee ahayd 340 milyan ayaa soo xerootay oo way is ku jaan go’een dhaqaalihii la helay iyo kharashkii baxay markan khasaare laguma jiro waa in ay xukuumaddu xisaab xidh sanadeedkii soo celisaa.
3.Miisaaniyaddii la filayey ee ahayd 340 milyan sidee uma soo xeroon ee waxaa khasnada dawladda soo gashay 300 Milyan, waa in xukuumaddu soo bandhigtaa xisaab xidh iyada oo sharaxaysa waxa is badelay.
Arrimaha kale ee miisaaniyad sanadeedku ku tiirsan tahay ayaa ka mid ah Marka miisaaniyaddu is dhinto xukuumadda waxaa horyaala laba talaabo.
1. In ay dayn gudaha dalka ka raadsato oo lacagta dalka ku qaadato deyntaas.
2. In ay deyn dibadda u raadsato iyo Bangiyada caalamiga ah, waana marka ay lacag adag u baahan tahay xukuumaddu oo ay ku bixiso deyn dibada lagaga leeyahay ama ay badeecada aasaasiga ah dibadda uga baahan tahay, had iyo jeerna xukuumaduhu lacagta adag ayey deyn ku qaataan si ay xaaladaha taagan ugu furdaamiyaan.
Marka laga yimaado shacabka oo intooda badan aanay miisaaniyad sanadeedka fahansanayn marka la sheego in miisaaniyadda sanadka 2020 ay tahay 469 milayn u haysta in ay khasnada dawladda ay hadda ku jirto taageeradana u muujiya, xukuumadda Nabad iyo Nolol waxay ilaa hadda awoodi kari la dahay in ay ka jawaabto su’aalaham.
Miisaaniyadihii sanadihii 2017, 2018, 2019.
1. Dhaqaalihii la Odorosay ma wax ka badan ayaa soo xerooday?.
2. Dhaqaalihii la Odoraysay iyo kharashaadkii la Odorosay miyey is leekaadee?
3. Dhaqaalihii la filayey ma waxbaa isla dhimay oo Kharashaadkii ayaa batay? , hadduu batay kharashkii imisaa lagu kabay dhaqaale? Halkeese laga keenay?.
Tusaale ahaan kharashaadkii dulsocodka ahaa ee RW Khayre bixinayey ee uu safaradiisa uu ku tagayey gobolada ku bixinayey muddooyinkii sadexda sano ahayd isaga iyo madaxweyne Farmaajo ayaa la ogaan lahaa halka ay ku arooraan kuwaas oo marka laysku daro malaayiin Dollar gaadhaya.
Haddii ay xukuumaddu xisaab celin ka soo celiso sanadahaas oo bulshada iyo baarlamaankaba la wadaagto waa hufnaan iyo musuqmaasuq la’aan, haddiise ay sidan ku socoto waa qayb ka mid ah hufnaan la’aanta iyo musuqmaasuqa baahsan iyo Maan sarcaadinta ay xukuumaddu bulshada ku wado, kuwa ay si kasta ugu qurux badan tahay marka laga yimaado, waxayna markaa u badheedhay xukuumadda NN in ay noqto xukuumad shafaafiyadii iyo hufnaantii baal martay oo ka dheer ammaano iyo adeeg.
W/Q Asad Adaani Ibrahim.
Previous Post: Deg Deg:Alshabab Oo Amar yaab Leh Soo Saartay,
Next Post: Deg Deg:Dawladda Turkiga Oo Si Adag Ugu Jawaabtay Faransiiska